စာကြည့်တိုက် | Myeik University
မြိတ်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကို အဆောင်(၃) တွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၌ ဉီးစွာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုမှဆက်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပင်မဆောင်သို့ ပြောင်းရွေ့၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလတွင် သီးသန့်အဆောက်အဉီအဖြစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်ဌာနတွင် ဌာနစိတ်(၇)ခု ခွဲခြားထားပါသည်။
ရည်ညွှန်းဌာနစိတ်၊ E-Lib ဌာန၊ သတင်းစာဌာန၊ စာနယ်ဇင်းဌာန၊ စာဖတ်ဌာန၊ ကွန်ပျူတာနှင့် စာငှားကောင်တာဟူ၍ သီးသန့် ခွဲခြားထားရှိပါသည်။ စာကြည့်တိုက်ရှိ ကတ်တလောက်ပုံးများကို စာဖတ်ခန်းနှင့် တွဲလျက်ထားရှိပါသည်။ စာအုပ်ပေါင်း မြန်မာ(၄၈၁၂) အုပ်၊ အင်္ဂလိပ်(၆၀၈၉)အုပ်၊ e-book (၂၃၇၀) အုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၉၁၂)၊ ဂျာနယ်(၇)မျိုး၊ စုစုပေါင်း စာနယ်ဇင်းအစောင်(၄၀) ကို လစဉ်စဆောင်းလျက်ရှိပါသည်။ စာကြည့်တိုက်ဝန်ထမ်းအင်အား(၇)ယောက်ဖြင့် စာအုပ်များကို နေ့စဉ်နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီမှ ညနေ (၄:00)နာရီ အထိ ငှားရမ်းခွင့်ပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များ ငှားရမ်းလိုပါက စာကြည့်တိုက်တွင် အသင်းဝင်ထားရှိမှသာ ငှားရမ်းခွင့်ပြု၍ ဆရာ၊ဆရာမများ ဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်သား၊ ကျောင်းသူများသာငှားရမ်းခွင့်ရှိပါသည်။
မြန်မာစာအုပ် - ၅၀ဝ၀ ခန်.
အင်္ဂလိပ်စာအုပ် - ၄၀ဝ၀ ခန်.
မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်ပေါင်း - ၂၀
စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ချိန် (Opening Hours)
၁၀းဝ၀ နာရီမှ ၄း၃၀ နာရီ ( Monday – Friday)
၁၀းဝ၀ နာရီမှ ၄း၃၀ နာရီ ( Monday – Friday )
ဆရာ၊ ဆရာမမျာနှင့် ဝန်ထမ်းများကို စာအုပ်-၃၊ အချိန်တစ်လ ငှားပေးသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ၁ အုပ်၊ (၃)၇က် ပေးငှားသည်။
စာဖတ်ခန်း (Reading Room)